Ampidiro ao anatin’ny alimanakan’ny Global Voices ny hetsika median’olon-tsotra anao! · Global Voices teny Malagasy
Ampidiro ao anatin'ny alimanakan'ny Global Voices ny hetsika median'olon-tsotra anao!
Voadika ny 08 Novambra 2018 2:45 GMT
Iray amin'ireo tsiambaratelo tsy avoaka indrindra ao amin'ity tranonkala ity ny alimanakan'ireo hetsika eo an-toerana sy eran-tany, ny fivoriana sy ny fihaonamben'ny bilaogera.
Sahirana amin'ny fivoriana any Afrika Atsimo, Tanzania, ary ny Fihaonamben'ny G8 any Alemaina ity volana ity. Manana hevitra ho an'ny tetikasa vaovao momba ny bilaogy ve ianao? Herinandro monja sisa no fara-fandraisana ireo tolo-kevitra Rising Voices sy ny J-Lab. Jereo ny kalandrie mba hahitana ireo hetsika hafa.
Ry bilaogera, te-hahafantatra izay alehanareo izahay ary inona no hobilaoginao. Ry mpikarakara hetsika, alefaso aty aminay ny vaovao momba ny fihaonambenareo, barcamps, sy ny fihaonan'ny bilaogera. Aza adino ny mampiditra rohy, daty, sy ny toeran'ny hetsika…
Ampiasao ity taratasy fenoina ity (alefaso any amin'ny tonian-dahatsoratra) raha manana soso-kevitra ianao. Misaotra betsaka noho ireo toro-hevitra, rohy, ary hevitra (koa fantatrao, tazominay ho tsiambaratelo ny zavatra sasany, tsy apetraka amin'ny kalendrie ).